क्षेत्रिय सभापतिदेखि मन्त्रीसम्म दलित नेता तर स्थानीय चुनावमा दलित नेताले नै टिकट पाउन मुस्किल! -
१४ बैशाख २०७९, बुधबार १९:५६
क्षेत्रिय सभापतिदेखि मन्त्रीसम्म दलित नेता तर स्थानीय चुनावमा दलित नेताले नै टिकट पाउन मुस्किल!
किरण श्रेष्ठ १४ बैशाख २०७९, बुधबार १९:५६ 1 min read
तनहुँ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले देशभरको माहोल तातेको छ । आइतबार र सोमबार मात्रै मनोनयन दर्ता प्रकिया सकिएको छ । तनहुँमा पनि विभिन्न ठुलादेखि साना तथा स्वतन्त्रसम्मले विभिन्न पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
सोमबार राति अबेरसम्म उम्मेद्वारी दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
जिल्लाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि १० वटै स्थानिय तहमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । कांग्रेस तनहुँमा दलित नेताको राम्रै पकड रहेको छ । तनहुँ क्षेत्र नं १ को सभापति नै श्याम मौराती छन् । यता डोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री नै छ्न ।
तर आसन्न स्थानिय निर्वाचनमा दलित नेताहरुले न्यून मात्रामा टिकट पाएका छन् । जुन शुन्यप्राय हो । जिल्लामा दलित नेता नै पार्टीको मुख्य पदमा हुँदा पनि दलित नेता किन उम्मेदवार बन्न सकेनन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १ मा दलित नेता केशबहादुर सुनार, व्यास-११ मा कृष्ण रुचाल र व्यास-१३ मा रेशम विकले वडाअध्यक्ष बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए । तर आफ्नै नेता टिकट बाड्ने पदमा हुँदा पनि उनीहरुले टिकट पाउन सकेनन् ।
निष्ठा र इमानको राजनिती सकिएको भन्दै उनीहरु निराश बनेका छन् ।
यस्तै जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि कांग्रेसबाट दलित नेताले वडाअध्यक्षको टिकट पाउन सकेनन् । केहि वडा सदस्यमा मात्रै पाएका छन् ।
त्यस्तै भानु नगरपालिकामा पनि उपप्रमुख बाहेक अन्य पदमा दलित नेता उम्मेदवार बन्न पाएका छैनन् । जिल्लाभर नै सोही अवस्था रहेको कांग्रेसका दलित नेताहरुको गुनासो रहेको छ ।
व्यास नगरपालिकामा एमाले–जोशी समूहको घरदैलो सुरु (तस्बिर सहित)
भिमादमा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र जनमुक्तिको गठबन्धन: घोषणापत्रमा विवादित जग्गा समस्या समाधानदेखि अवैध दोहनको अन्त्यसम्म